भारतीय महिलालाई नेपाली नागरिकता दिनबाट ७ वर्षसम्म पर्खिन स’किदैन – डा.कोइराला,,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
भारतीय महिलालाई नेपाली नागरिकता दिनबाट ७ वर्षसम्म पर्खिन स’किदैन – डा.कोइराला,,हेर्नुहोस!
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा.शशांक कोइरालाले भारतबाट वि”वाह गरेर आउने महिलालाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने माग राखेका छन् । टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनता जान्न चाहन्छन्’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग शुक्रबार कुरा गर्दै डा.कोइरालाले बिहे गरेर आउनेवित्तिकै विदेशी महिलालाई नागरिकता दिनुपर्ने ब’ताए । उनले विदेशी महिलालाई नागरिकता दिँदैमा नेपाललाई फि’जी बनाउन नसकिने ब’ताए ।
‘विदेशी महिलाले वि’वाह गरेर आइसकेपछि आफ्नो नागरिकता बुझाइसकेको छभने विदेशी बु’हारीलाई नागरिकता दिन केको आपत्ति ?’, उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘अरु (भारत)को हामीले किन फलो गर्ने ? हाम्रो आफ्नै हुनु प¥यो नि ।’ ‘न्यायाधीश बन्न नदिने, प्रधानमन्त्री बन्न नदिने, राष्ट्रपति बन्न नदिने यो ठीक हो’, महामन्त्री डा.कोइरालाले भने, ‘किन सात व’र्ष लगाउने ? कि’न प”र्खिने?’
‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको विमती छ । ०६२/६३ को आ’न्दोलनपछि रा’खिएको नागरिकताको व्यवस्था ठीक छ’, उनले भने, ‘नागरिकता दिएर नेपाल फि”जी बन्दैन । विवाह गरेर ल्याइसकेपछि नागरिकता दि’नुपर्छ ।’ विदेशी महिलालाई विवाह गरेर आएको सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने भनेर आवाज उठेका बेला कां’ग्रेसका महामन्त्री डा.कोइ’रालाले विदेशी महिलाहरूलाई विवाह गरेर आउनेवित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने अ’डान लि’एका हुन् ।
०६२/६३ को आन्दोलनपछि भारतीय नाग’रिकहरूले नेपाली नाग’रिकता लि’एको भनेर आवा’ज उठेको छ । त्यस बेला विवाह गरेर आउ’नेवित्तिकै भा’रतीय महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान समेत रा’खिएको छ । भारतमा विवाह गरेर जाने नेपाली महिलालाई सात वर्षसम्म नागरि’कता दिइ’दैन । तर, नेपालमा भारतीय महिला’ले आउने वित्तिकै नागरिकता पा’उँछन् ।
Previous MCC सम्झौता रोक्न मिल्दैन,छिटो गरि समयमा नै पास गरौं:परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली,,हेर्नुहोस!
Next MCC चिन सिध्याउने अमेरिकी रणनीति हो, पारित गर्न हुँदैन : गृहमन्त्री बादल,,हेर्नुहोस।
15 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता